24 Lee! Jehova na-eme ka ala a tọgbọrọ n’efu, na-emekwa ka ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe,+ o kpuwo ya ihu,+ chụsasịakwa ndị bi na ya.+ 2 Ọ ga-adịrị ndị nkịtị otú ọ dịịrị onye nchụàjà; ọ ga-adịrị onye na-eje ozi otú ọ dịịrị nna ya ukwu; ọ ga-adịrị nwaanyị na-eje ozi otú ọ dịịrị nne ya ukwu; ọ ga-adịrị onye na-azụ ihe otú ọ dịịrị onye na-ere ere; ọ ga-adịrị onye na-agbazinye ihe otú ọ dịịrị onye na-agbaziri agbaziri; ọ ga-adịrị onye na-anara ọmụrụ nwa otú ọ dịịrị onye na-akwụ ọmụrụ nwa.+ 3 A ga-emerịrị ka ala a tọgbọrọ n’efu. A ghaghị ibukọrọ ihe dị na ya,+ n’ihi na Jehova ekwuwo ya.+ 4 Ala a eruwela uju,+ ike agwụwo ya. Elu ala akpọwo nkụ, ike agwụwo ya. Ndị ukwu n’etiti ndị ala a atawo ahụ́.+ 5 Ndị bi n’ala a emerụwo ya,+ n’ihi na ha emebiwo iwu,+ gbanwee ụkpụrụ,+ mebie ọgbụgba ndụ nke ga-adịru mgbe a na-akaghị aka.+ 6 Ọ bụ ya mere ọbụbụ ọnụ ji ripịa ala a,+ ikpe amawokwa ndị bi na ya. Ọ bụ ya mere ndị bi na ya ji belata n’ọnụ ọgụgụ, ọ bụkwa mmadụ ole na ole fọdụrụ.+ 7 Mmanya ọhụrụ eruwela uju, osisi vaịn akpọnwụwo,+ ndị niile obi na-atọ ụtọ na-asụzi ude.+ 8 Aṅụrị a na-enweta n’ịkụ obere ịgbà akwụsịwo. Mkpọtụ nke ndị obi na-atọ ụtọ nke ukwuu akwụsịwo, aṅụrị a na-enweta n’ịkpọ ụbọ akwara akwụsịwokwa.+ 9 Ha anaghịzi abụ abụ mgbe ha na-aṅụ mmanya; mmanya na-egbu egbu na-eluzi ndị na-aṅụ ya ilu. 10 A kụtuwo obodo a gbahapụrụ agbahapụ.+ E mechiwo ụlọ niile ka a ghara ịbanye na ha. 11 A na-eti mkpu ákwá n’okporo ámá n’ihi ụkọ mmanya. Ọṅụ niile a na-aṅụrị akwụsịwo; aṅụrị nke ala a agwụwo.+ 12 A hapụwo obodo ahụ ka ọ nọrọ n’ọnọdụ na-eju anya. A kụọla ọnụ ụzọ ámá ya righirighi, o wee ghọọ mkpọmkpọ ebe.+ 13 N’ihi na otú a ka ọ ga-adị n’etiti ala a, n’etiti ndị dị iche iche, dị ka mgbe a kụtusịrị mkpụrụ dị n’osisi oliv,+ dịkwa ka mkpụrụ fọrọ afọ mgbe a ghọsịrị mkpụrụ vaịn.+ 14 Ha ga-eti mkpu ọṅụ n’olu dara ụda. Ha ga-esi n’ebe oké osimiri dị tisie mkpu ọṅụ ike n’ihi ịdị ebube nke Jehova.+ 15 N’ihi ya, ha ga-enye Jehova otuto+ n’ógbè nke ìhè,+ ha ga-enyekwa aha Jehova, bụ́ Chineke Izrel, otuto n’agwaetiti nke oké osimiri.+ 16 Ọ dị abụ olu ụtọ si na nsọtụ ala a nke anyị nụworo:+ “Ka Ịma Mma Dịrị Onye ahụ Bụ́ Onye Ezi Omume!”+ Ma mụ onwe m sịrị: “Atawo m ahụ́,+ atawo m ahụ́! Efuola m! Ndị aghụghọ aghọwo aghụghọ.+ Ee, ndị aghụghọ aghọwo aghụghọ.”+ 17 Ụjọ na olulu na ọnyà na-echere unu ndị bi n’ala a.+ 18 Ọ ga-erukwa na onye ọ bụla nke na-agbanahụ ụda nke ihe ọ na-atụ ụjọ ya ga-adaba n’olulu, onye ọ bụla nke sikwa n’olulu na-arịgota, ọnyà ga-ama ya.+ N’ihi na a ga-emeghe ọnụ ụzọ mmiri nke dị n’elu,+ ntọala niile nke ala a ga-amakwa jijiji.+ 19 Ala a agbabiela, a yọgharịwo ala a, e mewo ka ala na-ama jijiji.+ 20 Ala na-aṅagharị dị ka onye mmanya na-egbu. Ọ na-ete kweke kweke dị ka obere ụlọ nke ndị nche.+ Mmebi iwu ya na-anyịgbukwa ya,+ ọ ga-adarịrị wee ghara ibilite ọzọ.+ 21 Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ahụ na Jehova ga-eche ihu n’ebe ndị agha nọ n’ebe dị elu nọ, cheekwa ihu n’ebe ndị eze nke elu ala nọ.+ 22 A ga-achịkọta ha dị ka a na-achịkọta ndị mkpọrọ nuba ha n’olulu.+ A ga-akpọchikwa ha n’ụlọ mkpọrọ.+ Mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị, a ga-elebara ha anya.+ 23 E mechuwo ọnwa gbazuru agbazu ihu, ihere emewokwa anyanwụ na-achasi ike,+ n’ihi na Jehova aghọwo eze+ dị ebube+ n’Ugwu Zayọn+ nakwa na Jeruselem nakwa n’ihu ndị agadi ya.